ग्याष्टिकका कारण पेट फुल्ने समस्या छ ? घरमै पाइने यी चिजहरूले तुरुन्त राहत दिन्छ – Sandesh Press
ग्याष्टिकका कारण पेट फुल्ने समस्या छ ? घरमै पाइने यी चिजहरूले तुरुन्त राहत दिन्छ
August 17, 2021 229
काठमाडौँ । ग्याष्टिकको समस्या हुनेको पेट फुल्नु सामान्य हो । धेरै व्यक्तिहरूमा यो समस्या अक्सर हुन्छन्, जसको कारण उनीहरुलाई यो चिन्ताको बिषय बन्दछ ।
जब हामी खाना खान्छौं, हाम्रो पेटमा एसिडले तिनीहरूलाई एकदमै टुक्रा टुक्रा पार्दछ। पाचनको यस प्रक्रियाको दौरान, पेटबाट ग्यास बाहिर आउँछ जिसके कारण कहिलेकाँहि सुन्निन्छ र पेट दुख्छ। ग्याष्टिक हुनुको केही कारण छ ।
ग्याष्टिक किन हुन्छ ?
आवश्कताभन्दा बढी खाना खानाले पनि ग्याष्टिकको समस्या हुन्छ । खाने र पिउने समयमा पेटमा वायु पस्नाले पनि यो समस्या हुन्छ । धुम्रपान, मसलादार र भुटेको खानाले पनि यो समस्या निम्याउँछ ।
समयमा नखाँदा वा लामो समयसम्म भोको रहनु पनि एउटा कारण बन्न सक्छ । जससकारण यी कुराहरुमा ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। केही घरेलु चीजहरूले ती समस्याहरूबाट तुरुन्त राहत दिन्छ। हामी उनीहरूको बारेमा जानौं।
अदुवा स् अदुवाले ग्याष्टिक समस्यामा तत्काल राहत दिन्छ। ताजा काँचो अदुवाको सानो एक ट्क्रा एक चम्चा कागतीको रससँग सेवान गर्नुहोस् । अदुवा पेट फुल्ने समस्यामा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। अदुवा हालेको चिया पिउनु पनि ग्याँसको समस्याबाट राहत पाउनको लागि एक उत्तम घरेलु उपचार हो।
स्याउको रस पिउनुहोस्: बिहान एक गिलास पानीमा स्याउको रस मिसाएर खाली पेटमा पिउनुहोस्। यसले सम्पूर्ण दिनको लागि पेट फुल्नु वा ग्याष्टिक समस्याबाट राहत दिन्छ। तपाईंले स्याउको रसको सट्टा कागतीको रस पनि पिउन सक्नुहुन्छ।
आहारमा ध्यान दिनुहोस् : यदि तपाईंलाई प्राय जसो ग्यासको समस्या छ भने, तपाईंले आफ्नो खानापिनमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईंको आहारमा अधिक खेतबारीमा फलेका प्रोबायोटिक चिजहरू समावेश गर्नुहोस्। प्रोबायोटिक्सले खराब ब्याक्टेरियाहरूलाई बढ्नबाट रोक्छ। फल, तरकारी, अन्न र दालको मात्रा बढाउनुहोस्। यी चीजहरूले पेट सफा राख्न मद्दत गर्दछ।
धुम्रपान नगर्नुहोस् : धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि मात्र हानिकारक छैन, तर यसले अझ धेरै गम्भीर समस्याहरू पनि निम्त्याउँछ। धुम्रपानले पाचन प्रणालीमा समस्या सिर्जना गर्दछ । धुम्रपान गर्नेहरुको पेटमा समस्या हुनछ ।
सौंफको चिया पिउनुहोस् :सौंफ प्रायः घरेलु उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। सौंफलाई रातभर भिजाउनुहोस् र बिहानी फिल्टर गरेर यसको पानी पिउनुहोस् । यसले पेट फुल्ने समस्याको समाधान हुनेछ । सौंफ चियाको पिनाउनाले पनि पेट फुल्ने समस्यामा राहन पाउन सकिन्छ ।
Prevसास असाध्यै गनाएर लज्जित हुनुपर्छ ? उसोभए यी चिज खानुहोस्
Nextआहा ! भगवान् बिनोदले यसरी आफ्नि प्यारि अनितालाइ घुमाउदै (हेर्नुस् भिडियो )